သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ဆောင်းအိပ်မက်
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:59 AM
လူ့ ယဉ်ကျေးဆိုသူ များက ချစ်ခြင်းဟာ အမောပြေဝိုင်တစ်ခွက်ပါ လို့ သဘောထားတယ်
တချို့ လဲ ဒဿဂီရိ လို ဗိုလ်အောင်ဒင် လို ရင်ဆိုင်သွားတယ်။
တချို့ ကတော့ ရောက်တဲ့ နေရာတင် ခြေစုံရပ်လို့အသက်တာကို ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် နှောင်ကြိုးများ အပိုင်းပိုင်း ပြတ်ပါစေ။
ချစ်သူတိုင်း အဓွန့် ရှည်ပါစေ။
ဘယ်သူမှ မသိအောင် ဒီအပင်ကို ပျိုးခဲ့တယ်
ဒီပန်းရယ် ဘယ်တော့မှ ပွင့်နိုင်မယ် မဟုတ်ဘူး
အနာဂတ်ကို မင်းဆီ အပ်ပါတယ် ဆိုဖို့ လဲ
ငါဟာနေလောင်ခံ သစ်သီးတစ်လုံးသာ ဖြစ်တယ်။
စာပို့ ခိုတွေကလဲ မင်းလိပ်စာကိုမသိဘူး
မြေပုံမပါပဲ ပင်လယ်ကူးတဲ့လူကို ရူးတယ်ဆိုဦးတော့
လိပ်ပြာလေးရေ သာယာပါရဲ့ လား
အဝေးကြီးက လူမသိသူမသိ လရောင် ဟာ ဖျားပေါ့။
ခဏလေးတော့ သြဒဲဆာ ကိုသွားမယ်
ပြီးတော့ မင်း နဲ့ ငါ
ကမ္ဘာဟာ ငါ့ကို တိုးတိုးဖွဖွ နှုတ်ဆက်ပေါ့
ငါ မင်းကို ချစ်ခဲ့တယ်။
ဖြည်းဖြည်းလေးနှင့်ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ခံစားသွားတယ်။ တိုးတိတ်သွားသော မောင်ခေါသံကို ကြားမိတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြိုက်တဲ့ Ghost new version လားလို့တောင် တွေးမိတယ်။
ကိုမိုးထက်နေ ရဲ့ စာနှင့်ကဗျာကတော့ ရှယ်ပဲ ။
အမောပြေ၀ိုင် ကတော့ ဂွတ်တယ်ဗျာ ဆောင်းအိမ်မက်ကို ခံစားရင်း တခွက်လောက်ဗျို့။
သိပ်ကိုလှပတဲ့ ခံစားရေးဖွဲ့ချက်လေးပါပဲ မလေးရေ…
ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုပြီး စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဆက်ဖတ်ကြည့်နေရင်း နောက်ဆုံးမှာ ဇာတ်လမ်းရဲ့ မြုပ်ကွက်လေးကို တွေ့သွားတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိတယ်.
ဩော်. သူတစ်ယောက် ၀ိညာဉ်အဖြစ်နဲ့ ခြံလေးထဲမှာ လှည့်ပတ်ကြည့်နေတာကိုးလို့…
ရင်ဘတ်ထဲကို ညင်ညင်သာသာလေးနဲ့ တိုးဝင်လာပြီးတော့ နှလုံးသားကို ဆတ်ခနဲ လှုပ်နိုးလိုက်သလိုပဲ. အထူးသဖြင့် “မောင်” တစ်ယောက် မှန်ထဲကို ပြန်ကြည့်မိချိန်မှာပေါ့.
ဇာတ်လမ်းလေးက ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ ကြည်နူးဖွယ်ရာလေး သယ်ဆောင်သွားပြီးတော့ စာဖတ်သူကို အခန်းထောင့်လေးတစ်နေရာမှာ ချန်ထားခဲ့တယ်.
မလေးရဲ့ ရေးသားချက်တွေကတော့ ပြောင်မြောက်ပါတယ်ဗျာ. ဆက်လက်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရသစာလေးတွေ ပြုစုနိုင်ပါစေ…
မအိမ့်ရေ ဆောင်းအိပ်မက်ကို မမက် ပါရ စေနဲ့ မခံစားနိုင်ဘူး ဖတ်ရတာတောင် ရင်နင့်တယ်
မလေးရေ.. ဆောင်းအိပ်မက်ကို မခံစားနိုင်ဘူး..ငိုချင်တယ်..ပြီးတော့ မတွေးရဲဘူးကွယ်..
မလေး... ခပ်တိုးတိုးလေးပဲ နှုတ်ဆက်သွားတယ်၊ ဆောင်းအိပ်မက်လေးက အသက်ဝင်တယ်။ မလေး မက်တဲ့အိပ်မက် ညီမလေး နားလည်သလို ခံစားရုံနဲ့တင် ပြည့်စုံပါတယ်။ ဒီမှာလည်း အရမ်းချမ်းတယ်နော်။
အခုတစ်ရေးနိုးမှာထရေးနေတာမို့မှန်ကိုမကြည့်ရဲဘူးကွ။
အားပေးတဲ့အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ၊အားလာယူတဲ့အနေနဲ့ အမြဲရောက်ခဲ့ပါတယ်နော်။
ဖတ်ရင်းနဲ့ တစုံတရာကို သိနေသလိုပဲ..
ဟုတ်တယ် တစုံတရာကနေ တစုံတခုကို ပေးဆပ်လိုက်တယ်...
မလေးရေ အလွမ်းတွေက ဘယ်တော့မှ မကုန်ဆုံးနိုင်ဘူး...
ပန်းတွေ မပွင့်တဲ့ ခဏ
အစ်မရေ အစ်မရဲ့ ဆောင်းအိပ်မက်ကို အခါခါဖတ်မိနေပြီ။ လွမ်းဆွေးစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းရယ်..။